Alshabaab oo weerar lagu hoobtay ku qaaday xadka gobolka Bakool la wadaago Itoobiya – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Alshabaab oo weerar lagu hoobtay ku qaaday xadka gobolka Bakool la wadaago Itoobiya
Aato – Mareeg.com: Dagaal lagu hoobtay ayaa maanta ka dhacay deegaanka Aato ee dhaca xadka gobolka Bakool ee Soomaaliya la wadaago Itoobiya.
Dagaalka ayaa yimid kadib markii saaka salaaddii subax Alshabaab afar jiho ka weerareen deegaanka Aato oo ay degan yihiin ciidamo Soomaali ah iyo kuwa Itoobiyaan.
Gudoomiyaha deegaanka Aato, Dubad Xasan Cali ayaa BBC u sheegay in dagaalka manta ay ku dhinteen ilaa 28 ruux, islamarkaana ay ku dhaawacmeen ilaa 18 kale.
“Saaka salaadii subax ayaa Alshabaab afar jiho naga soo weerareen, waxaana dhacay dagaal xoog leh, annaga dhimasho badan ayaa na gaartay iyagana dhimasho badan ayaa gaartay, dhimashadu waa 28, dhaawacuna waa 18” ayuu yiri Dubad Xasan Cali.
Dubad Xasan Cali oo sharraxaya halka uu dhaco deegaanka Alshabaab weerartay ee Aato ayaa yiri “Degmada Aato waxay u dhaxeysaa Xuduuda Soomaaliya iyo Itoobiya, laakiin Bakool ayay ka tirsan tahay, halka la weerarayna waa xerada ciidamada amaanka Itoobiya”.
Gudoomiyaha ayaa sheegay in dagaalka lagu dilay 8 ka tirsan Alshabaab, “Nimanku waxey wateen gaadiid ayay ku daabulayeen dadka ka dhintay, laakiin annagu waxaan aragnay 8 iyaga ka dhimatay” ayuu yiri Dubad Xasan Cali.
Dubad Xasan Cali ayaa sheegay in dagaalka ka dhacay deegaanka Aato uu ahaa mid jilibka leysu aastay, taasina sida uu yiri keentay in dad badan dagaalka ku dhintaan.
Waa markii ugu horreysay ee Alshabaab weerar ku qaadaan deegaankaas xuduudka ah ee xerada ku lahaayeen ciidanka amaanka Itoobiya.
Somalia boycot meeting to protest Kenya’s illegal deportation of refugees
Turkish Airlines employee killed in Somalia attack: Spokesman